Marwada Madaxweyne Culusow oo qado u sameysay qaar ka mid ah abwaanada. | Radio Ogaal
Marwada Madaxweyne Culusow oo qado u sameysay qaar ka mid ah abwaanada.
By Radio Ogaal / September 11, 2015
Marwada Madaxweyne Culusow , Marwo Sahro Cumar Xasan ayaa u sameysay qado qaar ka mid ah abwaaniinta Soomaaliyeed ayaa waxa uu ahaa mid ay ku kala warqaadanayeen, isla markaana ay ku guubaabisay inay xoojiyaan wacyigelinta ay bulshada u hayaan, maadaama ay hormuud u yihiin bulshada inteeda kale.
Madiino Cali Tooxow oo ugu horeyn goobta hadal kooban ka jeedisay ayaa xustay in kulankan uu yahay mid Marwada Madaxweynaha ay dalbatay, si ay u ogaato xaaladda abwaaniinta Soomaaliyeed ay ku suganyihiin.
Kulankan Marwada Madaxweynaha ay la qaadatay maanta waxa uu qeyb ka yahay wax u qabshada bulshada iyo ka warqabkooda, runtii inta ugu muhiimsana Abwaan Singub ayaan u dhaafayaa” ayay tiri Madiino.
Abwaan Maxamuud Cabdulaahi Ciise Sangub ayaa sheegay inay xoojinayaan wacyigelinta bulshada, isla markaana ay Marwada Madaxweynaha Dalka Marwo Sahro guddoonsiin doonaan bilad sharaf oo ay u arkeen inay tahay hooyo u gurmada bulshada Soomaaliyeed.
Marwada Madaxweynaha Dalka Marwo Sahro Cumar Xasan oo ugu dambeyntii kulanka hadal ka jeedisay ayaa hoosta ka xariiqday in ujeedka kulanka uu ahaa mid ay ku xogwareysaneysa xaaladda abwaaniinta ay ku suganyihiin, iyadoo ugu baaqday inay joogteeyaan wacyigelinta bulshada, isla markaana muwaadin kasta looga baahanyahay samata bixinta dalka.
Marwooyinka Madaxweyne Xasan Sh Maxamuud Culusow ayaa hada ka hor taariikhdu markay ahayd Dec 24, 2012 ay Nac Nac u qaybiyey saraakiishii iyo Ciidankii qabtay Gobolka Sh Dhexe munaasabadii iyo doodii Nac Nac qaybinta hoo ka dhageyso Barnaamijka oo dheer dheer awgii dooda Naca Nacu waxay ka bilaabanaysaa 13 daqiiqo 25 sec.
← Wasaaradda Ganacsiga ee D.F Soomaaliya oo fariin hal kuma taal ah dirtay.
Hees waa la saxay Xisaabtii →
Tweets by @OgaalRadio
Dooda Edna Adan Soomaalida Koonfur waa wada Argagixiso, Ogaal Radio June , 17 2012
© 2015 radioogal.com – All rights reserved.